SPATHIPHYLLUM SWEET CHICO: SHARAXAADDA IYO SAWIRADA NOOCYADA KALA DUWAN EE SILVIO, BENITO IYO LAURETTE, IYO SIDOO KALE TAARIIKHDA, TILMAAMAHA DARYEELKA IYO DHALMO - SOOSAARKA DALAGGA
Nin qurux badan oo ka soo jeeda kaymaha kulaylaha - Spathiphyllum Sweet chico. Qaababka qaabka iyo daryeelka
Spathiphyllum waa mid ka mid ah dhirta ugu caansan ee gudaha ah oo ay dad badani ku koraan guriga si ay u abuuraan raaxo iyo isfaham.
Waxay ka dhigeysaa hawada qolka cusub, waxay ka nadiifisaa urka aan fiicnayn iyo nijaaro kala duwan, waxay si fiican ugu habboon tahay gudaha gudaha.
Si kastaba ha noqotee, marka ay sii kordheyso warshadan, waxaa jira xeerar iyo shucaac.
Spathiphyllum Sweet Chico - Dhirta geedaha ee gudahataas oo loola jeedo nooca hybrid. Muujinta sifuhu waa maqnaanshaha dabeecadda. Dhererka dhirta wuxuu gaari karaa 70-80 cm, Leaves waxaa hoos u cagaaran cagaaran. Waxay ku yaalaan petioles dheer, leeyihiin qaabka oval ah. Caleenta Spathiphyllum wuxuu leeyahay dhamaystiran, toosan oo dherer leh.
Inta lagu jiro ubax, dhirtu waxay leedahay tiro badan oo fallaadho ka soo baxaya ciidda. Sababtoo ah iyaga, spathiphyllum waa sida fanaan.
Inflorescence waxay caadi ahaan leedahay midab cad ama cad cagaaran. Waxaa ku wareegsan lobe dibedda, oo sidoo kale loo yaqaanno ilmagaleen. Marka dhirta ka baxdo, xayawaankii hore wuxuu qaadaa midab cagaaran.
Kala duwanaanta noocyada kale
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya Sweet Chico spathiphyllum iyo noocyada kale waa muuqaal aan caadi ahayn. Inta lagu jiro ubax, ilmagaleen cad ayaa u muuqda on caarada peduncle, iyo xajmiga ubaxa iyo caleemaha noocyo kala duwan waa isku mid.
Homeland Spathiphyllum Sweet Chico - Koonfurta iyo Bartamaha Ameerika. Warshadda waxaa inta badan laga helaa Koofur-bari Aasiya. Waxay u koreysaa, sida caadiga ah, oo ku taal bangiyada iyo harooyinka. Waxaa ugu wanaagsan in ay ku noolaadaan jawi diiran, kulaylaha kulaylaha.
Gaadiidka leh sawir
Kadib waxaad ka baran kartaa qaababka kala duwan ee Chico, Silvio, Laurette iyo Benito, iyo sidoo kale iyaga sawirada.
Silvio waa noocyo aad u qurux badan oo spathiphyllum ah oo leh ubaxyo jilicsan ilaa 75 cm oo cabbirkooda ah Noocyada muuqaalka - caleemaha cagaaran iyo inflorescences, kobaca degdegga ah. Haysashada caleemaha saafiga ah ilaa 30 cm dheer oo leh geeso istiraatiiji ah.
Nooc yar oo ah noocyo kala duwan oo spathiphyllum ah, oo la dhalaaley 2001. Caleemaddiisu waxay leedahay qaabab aad u dheer oval oo leh nalal iftiin ah. Xeryahanadu waxay gaadhaan heerkul dhan 80 cm, waxayna u koraan width 85 cm. Waxay leeyihiin petiole sare leh inflorescences kor ku xusan.
Noocyada kala duwan ee spathiphyllum leh cufan, caleemo dhalaalaya iyo ilaa 35 cm oo dheer, Si kastaba ha ahaatee, dhirtaas waxay kori kartaa ilaa 15 inflorescences inta lagu jiro ubax. Waxay u adkahay isbedelka cimilada iyo noocyada kala duwan ee iftiiminta.
Sida ugu fudud ee loo daryeelo loona koro noocyo kala duwan oo spathiphyllum ah. Waxay leedahay cabbir weyn. Heerkuna wuxuu gaaraa 70-75 cm, waxaa lagu kala saaraa ubaxyo badan oo baraf ah-cad oo muuqaal ah.
Goorma iyo sidee?
Spathiphyllum sida caadiga ah waxay bilaabaan inay Bloom 6-7 bilood, iyo duufaanteeda waxay socotay muddo ka badan hal bil. Sababtoo ah qaabkan, ubaxyada waxaa badanaa loo isticmaalaa jarista.
Daryeelka kahor iyo kadib
Spathiphyllum wuxuu jecel yahay jawi diiran oo qoyan, sidaa darteed guriga waa in uu u baahdo daryeel taxadar leh.
Kobaca degdegga ah, wuxuu u baahan yahay tiro badan oo iftiin ah iyo noocyo kala duwan oo dheeri ah. Si tan loo sameeyo, Bacriminta ku haboon Bacriminta, oo ay ku jiraan kalsiyum iyo fosfooraska. Daroogada ay ku jirto nitrogen, marka loo eego, waxay dhaawici kartaa geedka. Isticmaalka waa in ay joojiyaan.
Spacifillum waxay u baahan tahay waraabin dhexdhexaad ah sida ciidda u engegan. Isla mar ahaantaana suurtagal maaha in la oggolaado qalajinta ugu dambaysa.
Sidaas darteed in xaashida aan lumin lakin ka dib ubax, bacda qalajiyey waa in la gooyaa. Ka dib, in bacriminta aan loo baahnayn. Caleemaha waa in si joogto ah loo buufiyaa meeshii caadiga ahayd ee waraabinta.
Maxaa la sameeyaa haddii uusan ubaxin?
Mararka qaarkood waxay dhacdaa in noocyada spasifilum uusan kuusan, inkastoo dhammaan tilmaamaha daryeelka si sax ah loo raacay. Waxaa jira sababo kala duwan oo ku saabsan dhacdadan.
Sababta caanka ah waa caynsanaan la'aan. Haddii dhirta aan helin iftiin ku filan, waa in ay ku taallaa dhinaca qoraxda.
Mararka qaarkood spaciphyllum wuxuu dillaacayaa burooyinkeeda waxayna joojisaa in la barbardhigo haddii dhulku dillaaco. Tani waxay soo jeedinaysaa in uu ka maqan yahay dheecaan. Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay in aad ubaxdo ubax badanaa oo aad isticmaashid isla wakhtiga jilicsan, biyo sifeeya.
Intaa waxaa dheer, spacifillum ma bloomi doonaa haddii beeray wax yar oo dheri ah. Horumarinta caadiga ah, waxay u baahan tahay in xididadu ay qabsadaan awoodda oo dhan. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh uhesho xulashada dheriga geedka.
Spacifillum Sweet Chico waxay u baahan tahay nal badan iyo kuleylSidaa darteed waxaa fiican in dhirta this dhigay on bari, woqooyi ama dhinaca galbeed. Ma oggolaan karno ubax in ay qorraxdu si toos ah u dhacdo.
Waa maxay carrada?
Spatsifillum sida ugu wanaagsan ee ciidda carrada dabacsan oo leh pH dhexdhexaad ah. Si aad u abuurto ciid wanaagsan, waxaad u baahan tahay inaad ku darto humus, peat, sand iyo dhul sodan oo siman.
Waxa ugu wanaagsan in la gooyo balaastikada dhamaadka jiilaalka - horraanta gu'ga.
First of dhan, drainage waxaa la dhigay hoose ee dherarka la doortay, ka dibna ciidda hore loo diyaariyey waa la daadshay.
Seeds waxay u baahan yihiin in ay si siman u kala firdhaan dusha ciidda, waxoogaa yar oo qoto dheer dhulka. Markaas carrada waxaa lagu buufin karaa biyo nadiif ah oo la isticmaalayo dhalada buufin iyo daboolay polyetylene. Daboolka waa in laga saaraa maalin kasta muddo waqti ah si uu u wareejiyo dhirta hawada.
Marka caleemaha ugu horreeya la sameeyo (sida caadiga ah tani waxay dhacdaa 10 maalmood ka dib), filimka waa laga saari karaa oo dhererka lagu dhejiyay meel fiican. Ka dib muuqaalka waraaqaha ugu horeeya waxay u baahan yihiin inay qaataan soo qaado.
Xilliga xagaaga, heerkulka ugu fiican ee spathiphyllum waa 22-24 digrii. Xilliga jiilaalka, heerkulka ugu yar ee la ogolyahay waa 16-17 digrii. Marka heerkulku ka hooseeyo 13 digrii, kobaca ubaxu wuu hoos u dhacaa, taas oo si xun u saameynaysa xaaladda geedka guud ahaan.
Wixii spathiphyllum waraabin badan oo muhiim ahkaas oo la samaynayo 2-3 jeer toddobaadkii. Si arrintan loo sameeyo, isticmaal biyo keliya. Waxay u baahan tahay in lagu shubo dheriga si taxaddar leh si aad u hesho dhulka oo kaliya.
Waraaqaha Spathiphyllum waa in lagu buufiyaa dhalada buufinta si looga hortago in ay qalajiyaan. Nidaamkan waxaa la qaadaa labo jeer toddobaadkii. Xilliga jiilaalka, waxaa la samayn karaa waxoogaa yar.
Waqtiga ugu haboon ee bacarimiddu waa laga bilaabo Maarso ilaa Sebtembar. Tani waxay u baahan tahay inaad isticmaasho xeryaha macdanta adag. Si aan waxyeello u geysan dhirta, xalku waa inuu lahaado xoogaa daciif ah - wax ka badan 1 g halkii litir oo biyo ah. Ubax ka hor inta aanad quudin iyo ka dib marka loo baahan yahay si fiican loo waraabiyo.
Laguma talin in la isticmaalo Bacriminta in ka badan hal mar labadii toddobaadba mar. Si ubaxu sii dheeraado, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho bacriminta, oo ay ku jiraan qayb ka mid ah fosfooraska iyo potassium.
Marka ubaxu dhameeyo, peduncle waa in la gooyaa.si aanay u nuugin nafaqooyinka. Iska yaree sida ugu dhow ee suurtogalka ah ee rhizome. Haddii ay jiraan caleemo qallalan oo bukaan ah, waa in sidoo kale la gooyaa, iyo qodobbada la gooyo waxaa lagula dhaqmayaa dhuxul.
Marka uu xasaasiyad ku faafay dheriga oo dhan, waxaad u baahan tahay inaad dhirta bedesho. Habka xaraashka ayaa habboon tan.
Waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro qayb yar oo ka mid ah dhulka laga bilaabo nidaamka asaasiga ah, si aanay u dhicin.
Dareemka rinjiga waa in la nadiifiyaa.
Wixii dhirbeddelka dhirta u isticmaal dherer ka weyn mid hore si loo siiyo xididada meel ay u sii kobcaan.
Taas ka dib, waraabinta waa in la yareeyaa, dheriga waa in mar kale la daboolaa filim waxaana la duubaa dhowr jeer maalintii.
Sidee loo dhufan karaa?
Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu faafin karo spathiphyllum, mid kasta oo ka mid ah wuxuu leeyahay sharciyadiisa iyo sheybaarkiisa.
Habkani wuxuu si fiican u qabtaa guga ama xagaaga.
Markii ugu horeysay ee laga jaray warqadda warqadda, ka dibna ku rid biyaha.
Marka xididdada la aasaasay, waxaad dhali kartaa dhirta ee ciidda diyaarisay.
Kala wareegaya baadiyaha
Nidaamkan dhalmada waxaa ugu fiican guga.
Buundada Spathiphyllum waa in loo qaybiyaa qaybo, mid kasta oo ka mid ah wuxuu leeyahay ugu yaraan saddex baakadaha caleen.
Ku beeray dheri cusub isla qoto dheer sidii mid hore.
Ka hor inta aan la marin nidaamkan, xididada waa in la bakhtiiyo oo biyo la raaciyaa.
Wixii habkan, miraha waxaa lagu beeray dheri leh ciidda pre-diyaarisay.
Dheriga Tani waxaa lagu daboolaa shumac, carrada waxaa la buufiyaa ilaa geedo ugu horeysa u muuqdaan.
Ka dib markii muuqaalka ka hor 2-3 biiro, dhirta u baahan tahay in lagu beeray dheriyo gooni ah.
Cudurada Spathiphyllum waxay inta badan saamaynayaan caleemaha dhirta. Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu caansan ee sii kordhaya waa caleemaha yellowed. Tani waxay dhacdaa haddii dhirta si dhif ah loo waraabiyo.
Haddii spathiphyllum ka maqan yahay qoyaan, caleemaha qalalan iyo lakabka. Haddii iftiinka iftiinka uu aad u iftiimayo, ama iftiinka qorraxda tooska ah wuxuu ku dhuftaa dhirta, caleemuhu waxay noqon karaan mid cirro leh, hoos u dhacaan. Haddii caleenta, cagaarshow, waa la madoobaaday, sababta keentay waxay u badan tahay cudur ka mid ah nidaamka xididka oo idil. Tani waxay ku dhici kartaa biyo badan iyo bacriminta.
Cayayaanka khatarta ah ee spathiphyllum waa caarada caarada. Wuxuu ku duubaa shabakiisa dhexdeeda caleenta, kaas oo keena inuu qalalo. Si aad uga takhalusto cayayaanku, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho basal ama saabuun, oo nadiifi caleemaha webka.
Laga soo bilaabo hoose ee aphid caleenta ah ayaa laga yaabaa inay muuqdaan, kuwaas oo nuugaan casiir ka soo dhirta iyo dhufto si dhakhso ah. Waxaa la geeyaa caawinaadda nicotin sulfate. Laakiin xalkani waa inuu xoogaa yaraa.
Haddii caleemaha la daboolay dhibco mug leh, sababtu waxay noqon kartaa xayawaanka - cayayaan caadi ah. Waxaad la dagaallami kartaa adoo adeegsanaya xalka saabuun, kaas oo tubaakada ama santuuqa lagu daro.
Spathiphyllum Sweet Chico waa warshad gudaha ku habboon kaas oo gacan ka geysanaya sameynta jawi deggan oo qurux badan. Haddii aad raacdo dhammaan xeerarka daryeelka dhirta, waxay noqon doontaa quruxda dhabta ah ee guriga.
Sida loo fahmo waxa jiran Begonia?
Xayeysiis ah: sida loo daryeelo guriga
Xeerarka ilaalinta shimbiraha ee beeraleyda gaarka ah ee muwaadiniinta
Danjiraha Hindiya ayaa kugula taliyay beeralayda Ukraan inay soo saaraan digo
Jardiinka Jardiinka ayaa ah hab weyn oo lagu kala qaybiyo adduunka dhirta beertaada
Dub Currant Difaaca
Dhirta basbaaska leh
Aan muddo dheer ka hor, in dhammaan warbaahinta, warbixinno ka mid ah mucjisooyinka - kiniinada nidaaminta koritaanka dhirta inta badan u jeexay. Waxay u ballan-qaadeen horumarka degdegga ah ee geedo, koritaanka dhirta oo degdeg ah, koror aan horey loo arag soo-saarka. Hadday dhab ahaantii jiraan kiciyeyaasha noocan oo kale ah, waxaad u baahan tahay inaad fahamto wax badan. Read More
Beeralayda Yukreeniyaan ayaa bilaabay shaqo guga.
Sida loo karsado malmadaha tufaaxa: cuntada sida sawirada ah